muchinjikwa-achifurira - China Langzhi Welding Equipment
Overview Our nomoto hurongwa chinosanganisira muchinjikwa achifurira, nomoto akatendeukira chinotenderera, nomoto rotator nezvimwe mubatsiri michina .Appliances: kumanikidzwa mudziyo, hombe dhayamita nyere longitudinal & dzeraundi musono nomoto uye idenderedzwa butiro uye kugokora kukodzera nomoto. Tinobvumirana TIG uye plasma ndiri weredha, yeplasma sezvo nechigadziko, TIG (inosimbisa waya) sezvo kufukidza .One-divi nomoto,-divi maviri Kuumbwa. anyatsofukidzwa chinhu chakakombama sezvo pabutiro kuri shandika maererano Welding Michina chinodiwa. Characters: flexiblely convery, Co ...
Our nomoto hurongwa chinosanganisira muchinjikwa achifurira, nomoto akatendeukira chinotenderera, nomoto rotator nezvimwe mubatsiri michina .Appliances: kumanikidzwa mudziyo, hombe dhayamita nyere longitudinal & dzeraundi musono nomoto uye idenderedzwa butiro uye kugokora wakakodzera nomoto.
Tinobvumirana TIG uye plasma ndiri weredha, yeplasma sezvo nechigadziko, TIG (inosimbisa waya) sezvo kufukidza .One-divi nomoto,-divi maviri Kuumbwa. anyatsofukidzwa chinhu chakakombama sezvo pabutiro kuri shandika maererano Welding Michina chinodiwa.
Characters: flexiblely convery, yakakunakira operation.Customize inowanikwa maererano nezvaidiwa wako.
nomoto urefu dungwerungwe 1500mm-12000mm
nomoto dhayamita dungwerungwe 400-5000mm
trolley havukavu 0-1500mm / Maminitsi
nomoto ukobvu 3-30mm
Previous: paInternet Stainless simbi
Next: Gantry nomoto hurongwa